Accueil > Gazetin'ny nosy > Tsena Mora : Mila fandaminana fa tsy nety ny omaly
Tsena Mora : Mila fandaminana fa tsy nety ny omaly
Toko tapaka, vilany mitongilana, izay tsy mety arenina.” Tsy fanakianana na fitsikerana, sanatriavin’ny vava no itondrana ny tranga miseho eny anivon’ny fiaraha-monina, fa mba hifanitsiana sy handaminana ny raharaha, ary heverina ho tsipi-teny sy tolo-kevitra ka ataovy toy ny voankazo an’ala re, raha mamy atelomo fa raha mangidy kosa, aloavy.
Momba ny “Tsena Mora” ny resaka. Tena mahavotra fiainam-pianakaviana tokoa io ary hita sy tsapa fa mifanandrify amin’ny vanim-potoana tena ilàn’ny maro azy.
Tsy tokony hadinoina mantsy fa ny sakafo toy ny vary sy menaka no isan’ny foto-tsakafon’ny Malagasy ka na ireo ihany aza, miampy ny siramamy sy lafarina, oahtra, no mba takatry ny volakely any antsikinan’ny renim-pianakaviana na voavidin’ny raim-pianakaviana avy amin’ireny “Tsena Mora” ireny dia efa “hitan’ny vazana izay”, hoy ny fitenenana.
Misy indrokely anefa ny tranga sasany hita omaly momba ity “Tsena Mora” ity. Natambatra amin’ny sekoly fanabeazana fototra (Epp) ny fivarotana ireo entan’ny “Tsena Mora” ireo, ary tsy ny fokonolona ao anatin’ilay fokontany misy an’ilay sekoly ihany no tokony hahazo ny anjarany ao fa ny fokontany manodidina, araka izay famaritana efa natao.
Misy indrokely ilay izy satria ny fepetra voalohany tokony nohajaina dia ilay hoe “tsy tokony hitangorona”. Noho ilay toerana naaovana ny “Tsena Mora” nofaritana amin’ny sekoly tokana ho an’ny fokontany maromaro manodidina, indrindra fa ny eny amin’ny faritra iva izay tra-pahasahiranana ara-pivelomana na mahantra ny 90%-n’ny mponina, dia mila an’ilay entan’ny “Tsena Mora” avokoa. Nihazakazaka nanatona an’io sekoly io, noho izany ny mponina ka teraka ho azy ny fitangoronaa. Tsy tsaroan’ny maro intsony fa irika iray ifindran’ny aretrina “coronavirus” ny fitangoronana.
Etsy ankilany, na ny fanajana ny “iray metatra” manelanelana ny tsirairay aza, mazava ho azy, dia tsy voahaja koa. Raha ireo olana ireo izany no itadiavana vahaolana dia tokony velarina ny toerana ametrahana ny “Tsena Mora”. Maninona moa raha asaina misoratra anarana mialoha ny isan’ankohonana mila “vary sy menaka” avy amin’izany, dia na aterina isam-baravarana na antsoina tsikelikely?
Fa ankoatr’izay, ny tompon’andraikitra ny fokontany misy an’ilay sekoly koa sy ny talen’ny sekoly mampiantrano an’ilay “Tsena Mora” dia manararaotra ka miteraka olana. Ny filohampokontany misy an’ilay sekoly, ohatra, raha ny omaly, dia mihevitra fa tokony ho loha-laharana amin’ny fahazoana ny entana ny mponina ao amin’io fokontany io fa ny avy amin’ny fokontany hafa mandefitra. Tsy mety izany.
Fa ambonin’izany, velon-taraina ny mpanjifa tamin’ny ankapobeny fa ny vary dia tsy ampy lanja ary ny menaka dia tsy ampy fatra, ka mila fanarenana izany rehetra izany tsy hiteraka olana.
Aoka hifampitsinjo fa tsy hifanararaotra. Izany no teny efa ifanentanana sy ifampisariham-pisainana avy amin’ny fitondram-panjakana ka tsy mety raha ny tompon’andraikitra any ifotony indray, sanatriavin’ny vava, no ho loharanon’ny fifanambakana sy ny kolikoly. Tsy afenina fa ny talen-tsekoly amin’ireny sekoly mampiantrano ny “Tsena Mora” ireny dia toy ny manao kolikoly na risoriso amin’ny entana mihitsy satria toa manana tombon-jo manokana amin’izay tiany izy amin’ilay entana.